Polyester Fiber Acoustic Panel ၏အင်္ဂါရပ်များ - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
Polyester Fiber Acoustic Panel ၏အင်္ဂါရပ်များ
၏အင်္ဂါရပ်များPolyester ဖိုက်ဘာ ကော့စတစ် ပန်နယ်
1. Polyester ဖိုင်ဘာ အသံစုပ်ယူမှု အကန့်များ သည် ကောင်းမွန်သော အသံစုပ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည် ရှိသည်။ တပ်ဆင်ရန်အတွက် အပေါက်တစ်ခုချန်ထားရန် keel ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ 9mm အထူပန်းကန်၏ အသံစုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် I-level အသံစုပ်ယူမှုပစ္စည်း၏စံနှုန်းထက် ပိုကောင်းသည်၊ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်၏ အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းမှာ အတော်လေးမြင့်မားပါသည်။
2.Polyester ဖိုက်ဘာ ကော့စတစ် ပန်နယ်ကောင်းမွန်သော အသံစုပ်ယူနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများအပြင် မီးမလောင်နိုင်သော၊ အစိုဓာတ်ခံ၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော၊ နှင့် အပူ-လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
3. Polyester ဖိုက်ဘာ အသံစုပ်ယူသည့် အကန့်များသည် အတော်လေး ခိုင်ခံ့ပြီး၊ ထိခိုက်မှု-ခံနိုင်ရည်၊ ဆန့်နိုင်အား အားကောင်းပြီး တာရှည်ခံပါသည်။
4. inorganic fiber နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်း၊Polyester ဖိုက်ဘာ ကော့စတစ် ပန်နယ်အထူအားဖြင့် ပါးလွှာပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှုအတွက် အဆင်ပြေကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်များကို သက်သာစေသည်။
5. polyester ဖိုင်ဘာအသံစုပ်ယူနိုင်သော panel ၏မျက်နှာပြင်သည် ပုံစံမျိုးစုံနှင့် အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး အလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော၊ ပစ္စည်းသည် အတော်လေးခိုင်ခံ့ပြီး ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကဲ့သို့သော အလှဆင်ပစ္စည်းများ မလိုအပ်ပါ။ perforated panels များ။ အသံစုပ်ယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းပြီး ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်အားကို သက်သာစေပြီး နည်းပညာသည် အသံစုပ်ယူသည့် အလှဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
6. polyester fiber သည် အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel သည် ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သာမန်ဓားဖြင့်ခုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို လက်သည်းသေနတ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ကပ်၍ ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး မြန်ဆန်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေရန် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖိုက်ဘာဖုန်မှုန့်များ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
7. Polyester ဖိုင်ဘာ အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel သည် ဖျက်ရလွယ်ကူသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို နောက်ဆက်တွဲ ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေပါ။
8. Polyester ဖိုက်ဘာ ကော့စတစ် ပန်နယ်စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ပစ္စည်းသည် အဆိပ်အတောက်မရှိသည့်အပြင် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲ ပေါက်ကွဲစေတတ်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် ပျက်စီးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်လျှင်တောင် သေးငယ်သော ဆန့်နိုင်စွမ်းအားနှင့် ပြင်းထန်သော ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်းသည် အပျက်အစီးများ ပြန့်ကျဲစေကာ အခြားအရာဝတ္ထုများကို ပျက်စီးစေကာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပေ။ အများသူငှာ နေရာများနှင့် အများသူငှာ အဆောက်အဦများတွင် အသံစုပ်ယူအလှဆင်ခြင်းအတွက် အတော်လေး ဘေးကင်းပြီး သင့်လျော်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော:3D Acoustic Panels များ၏ Effect ကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းရင်းများ
နောက်တစ်ခု:Fabric Acoustic Panels တပ်ဆင်နည်း